यी खानेकुराहरुले देखिन्छ सँधै तन्नेरी !! | सुदुरपश्चिम खबर
यी खानेकुराहरुले देखिन्छ सँधै तन्नेरी !!
मानिस चाहन्छ आफू सँधै जवान वा तन्नेरी देखिरहुँ । जो कोहीलाई आफू छिट्टै बुढोपाको देखिएको मन पर्दैन तर, उसले आफ्नो त्यो चाहानाअनुरूपको खानपानमा भने हेलचेक्रयाइँ गरिरहेको हुन्छ ।
हामीले खाने भोजन नै हाम्रो शरीरका लागि पोषणको स्रोत हो । हाम्रो शरीरलाई भिटामिन, खनिज र फाइटोकेमिकल्स जस्ता केही पोषक तत्वको आवश्यकता हुन्छ । यसले अंग र प्रणालीको कार्य सञ्चालन गराउन सहयोग गर्छ ।
यी पोषक तत्वले हाम्रो शरीरलाई हानिकारक रोग पैदा गर्ने र पर्यावरणमा रहेको विषाक्त पदार्थको प्रभावबाट बचाउँछन् । उचित पोषणले स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ ।
हाम्रो शरीरका लागि पाँच प्रकारका पोषक तत्व आवश्यक हुन्छन्– प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, भिटामिन एवं मिनरल्स र फाइबर ।
प्रोटिनमा एमिनो एसिड हुन्छ । यसले शरीरमा उर्जा बनाउन सहयोग गर्छ । हाम्रो शरीरमा २० प्रकारका एमिनो एसिड हुन्छन् । यी सबै एसिड शरीरको उचित कार्यप्रणालीका लागि आवश्यक हुन्छन् । यसमा १२ एमिनो एसिडको निर्माण शरीरमा हुन्छ, बाँकी एमिनो एसिड खानेकुराबाट प्राप्त हुन्छ ।
फ्याट अर्थात बोसोले आफ्नो विभिन्न कार्य पूरा गर्नका लागि शरीरलाई ऊर्जा दिन्छ । हाम्रो शरीरमा पोषक तत्व एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने काम पनि बोसोले गर्छ । मुख्यतः फ्याटी एसिड दुई प्रकारको हुन्छ– ओमेगा ३ फ्याटी एसिड र ओमेगा ६ फ्याटी एसिड ।
हाम्रो शरीरमा फाइबर पच्दैन । तर, फाइबरले पाचन यन्त्रलाई चुस्त बनाउँछ । यसले कब्जियतबाट छुटकारा दिन्छ ।
भिटामिन र मिनरल्स
पाचन प्रक्रियालाई नियमित एवं शरीरको उचित विकासका लागि भिटामिन र खनिजको थोरै मात्रामा आवश्यकता हुन्छ । यसैले हामीले आफ्नो आहारमा भिटामिन र खनिज पनि सेवन गर्नुपर्छ । यी पोषक तत्व अनाज, सब्जी र तेलको माध्यमबाट मिल्दछ ।
कुन खानामा के पाइन्छ ?
अनाज– मटर, दाल, सिमी आदिमा उचित मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ । गहुँ, जौ, मकै, चामल आदिमा कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ । जौ, गहुँ, मकै, ब्राउन राइस आदिमा फाइबर पनि हुन्छ ।
मटर, पालुङ्गो, च्याउ, फूलगोभी आदि सब्जी प्रोटिनका राम्रा स्रोत हुन् । आलु र जरा भएको सब्जीमा उचित मात्रामा कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ । हरियो मटर, ब्रोकाउली, मूला, बन्दागोभी आदिमा फाइबर पाइन्छ ।
केरा, स्याउ, आरु आदि फलमा प्रोटिन पाइन्छ । केरा, आरुजस्ता फलमा कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ । स्याउ, नास्पाती जस्ता फलमा फाइबर पाइन्छ ।
सर्स्यूको तेल, जैतुनको तेल, सोयाबिन तेल, सूर्यमुखी तेल आदिमा बोसो अधिक मात्रामा पाइन्छ । (मकालु खबर बाट सभार)
यी चार खराब बानीहरुले समय अगावै निम्त्याउँछ बुढेसकाल !!
यी ६ गुण भएका युवतीसँग विवाह गर्ने पुरुष हुन्छन् राजा समान !!